Izany dia noho ny nisian’ny hala-jaza tamin’ny talata lasa teo ary nahitana ilay zaza izay efa maty an-drano omaly. Tonga hatramin’ny fisavan’ny zandary ny tranon’ny olom-boafidy iray teny an-toerana rehefa voatondro molotra. Saika nodoran’ny olona hatramin’ny tranony noho ny honohono. Miandry ny fisamborana izay nahavanon-doza ny olona ankehitriny.
FITAKIANA HAMERENANA NY FIFIDIANANA
Mbola misy mitsangana mitaky ny hamerenana ny fifidianana farany teo ihany ireo fikambanana sy mpanao politika. Ao anatin’izany ny fikambanana nanohana ny IRD izay resy tany Betroka. Voalazan’izy ireo fa nangala-bato ilay kandida nandresy ka tsy eken’izy ireo. Nahagaga ny maro tokoa ny hoe vovonana mpanohana ny fitondrana indray no mitaky ny hamerenana ny fifidianana tahaka izao.
HO ANY IVELANY INDRAY RAJOELINA
Handeha ho any ivelany indray ny filohan’ny Repoblika amin’ity herinandro ity. Nahazo fanasana hanatrika ny fihaonana momba ny asa avy amin’ny OIT ny filoha sy ny delegasionina izay hiaraka aminy. Hita tokoa fa dia tsy mitsitsy mihitsy ny mpitondra fa dia mandeha any ivelany foana rehefa misy ny fanasana hatao amin’ny fitondrana. Filoha tia misehoseho ary hatreto dia mifanohitra tanteraka ny hoe politikam-pitsitsiana sy ny zava-misy hataony, raha oharina amin’ny fivoahana isaky ny mandeha miaraka amin’ny delegasiona marobe.
Tsy misy afa-tsy ny televiziona nasionaly ihany no afaka ny mandefa ny lalaon’ny CAN izay hataon’ny Barea. Ho voasazy arak’izany ny haino aman-jery tsy miankina raha toa ka maka ny sarin’ny olona dia alefa amin’ny fahitalavitrany mandritry ny lalao izay hataon’ny malagasy. Isan’izany koa ireo orinasa mpampanofa fahitalavitra azo amin’ny satelita (Canalsat, Parabole, Startimes) izay tsy eken’ny fanjakana ny handefasan’ireo ny lalaon’ny Barea izany.
FILAHARAM-BE ENY AMBOHIDAHY
Miverina indray ny filaharam-be etsy amin’ny sampana mpanome laharan’ny fiarakodia sy moto etsy Ambohidahy. Vao maraina dia efa tonga maro ny olona ny hanolo ny taratasy fahazoana mamily fiarakodia na koa ny karatra volon-davenona.. Voafetra eo amin’ny efapolo ihany anefa no raisina ary hasaina miverina fotsiny izay aorian’izay kanefa amin’ny dimy maraina dia efa misy ny olona tonga milahatra. Mila fandaminana indray mba tsy hisian’ny olana toa ny tany aloha.
FENO BAR ANTANANARIVO
Feno « bar » ny renivohitra. Asa izay loatra ny mpanome alàlana hahafahana mivaro-toaka eto amintsika fa ny tsikaritra dia isaky ny kihon-dàlana dia efa misy bar izay. Indrindra koa any amin’ireo ambany tanàna izay be olona sy tery ny làlana kanefa dia feno olona mamo mifamezivezy eny amin’ny arabe. Hatreto dia toa mahazo mora foana ny « licence » momba izany izay mikasa ny hanokatra toeram-pivarotana toaka. Ny oniversite indray aza no hasaina mikisaka fa tsy ny bar no akatona, raha jerena amin’ny lalàna vaovao izay navoakan’ny minisitera mpiahy ny fampianarana ambony. Hafakely.